काठमाडौं, ३० जेठ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पदमुक्त भएपछि लोकतन्त्रको बारेमा धाराप्रवाह प्रवचन दिए । उनले निष्ठा र आदर्शको कुरा गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आफूले राजनीतिक निष्ठा गुमाउन नसक्ने बताउँदै आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई पनि डामे ।
आफ्नो पद धरापमा परेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता टिकाउनको लागि दुई/दुई पटक संसद विघटन गरेको हुँदा गुरुङलाई पनि संसद विघटन गर्न निर्देशन आएकोप्रति पत्रकारले प्रश्न गर्दा उनले जवाफमा उक्त कुराहरु बताएका हुन् । ‘राजनीति फोहोरी खेल हो भनिन्छ तर, राजनीति होइन पात्र फोहोरी हुन्,’ जवाफमा उनले भने ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री गुरुङले सरकारमा उभिने जोकोही नेता पनि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन नसक्ने बताए । नेताहरु नीति र विधिको शासनमा चल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
उनलाई शनिबार भएको धर्ना र आन्दोलनका बारेमा पनि प्रश्न सोधिएको थियो । उनको जवाफ थियो, ‘बहुमत पुर्‍याएपछि सरकार गठन हुन्थ्यो तर, जंगली पारा देखाइयो । सरकारमा जान दुई घण्टा पनि कुर्न किन सकिदैन ? बलको आधारमा सरकार बनाउनुपर्छ, पीएसलाई हटाउनै पर्छ भन्ने देखियो ।’
विश्वासको मत गुमाउनासाथ पुनः मुख्यमन्त्रीमा किन दाबी गरेको भन्ने प्रश्न पत्रकारले गरे । जुन प्रश्न आफैंमा शक्तिशाली थियो । किनकी गुरुङ राजनीतिक संस्कार र लोकतन्त्रका कुरा गरिरहेका थिए ।
मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको विषयबारे स्पष्ट पार्दै उनले सभामुख बाहेक अन्य ५९ सांसदले नै दाबी गर्न सक्ने बताए । उनले भने, ‘मैले हाम्रो पार्टीको २७ जना सांसदको विवरण बुझाएको हुँ ।’
महामारीको बेला सरकार परिवर्तन गर्नु अलोकतान्त्रिक काम भनिरहँदा उनी थपिरहेका थिए, ‘गठबन्धनबाट बनाइएका सरकार जुनसुकै बेला पनि परिवर्तन हुन सक्छ ।’
पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेकपा एमालेमा संघीयताको कार्यान्वयनमा इमान्दारितापूर्वक लडेका मानिस हुन् । पार्टीभित्रै बसेर लड्न गाह्रो थियो । अझ ओली शक्तिशाली भइरहँदा संघीयताको पक्षमा उनकै समूहमा रहेर काम गर्न मुस्किल थियो । प्रतिप्रवाह नै थियो । तर उनले संघीयताको पक्षमा संघको सरकार र आफ्नै पार्टीका नेतासँग लडेको कुरा सही हो ।
यति हुँदाहुँदै पनि उनले आइतबार गरेका कतिपय तर्कहरु सही भए पनि उनको आफ्नै व्यवहारले त्यसलाई खण्डन गरिरहेको थियो । सत्ता जोगाउन एकाध महिनामा गरिएका केही कदमहरुले उनको कदम ह्वात्तै घटाएको चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ ।
उनले आफ्ना २७ जना सांसदहरुको सूचि बुझाएको बताउँदै स्पष्टरुपमा ढाँटेको देखिन्छ । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री घोषणा गर्न गरेको ढिलासुस्तीसँग एमालेको रुचि जोडिएको कुरा जति लुकाउन खोजे पनि लुक्ने कुरा होइन ।
गण्डकी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीबाट दुईजना प्रदेशसभा सदस्य छन् । ती दुवै पूर्वसमाजवादी पार्टी बन्नुभन्दा पनि अगाडि नयाँ शक्ति पार्टीबाट निर्वाचित भएका हुन् । तर पृथ्वी सुब्बा गुरुङहरुकै पहलमा गण्डकी प्रदेशमा जसपाको प्रदेश अध्यक्ष भनी अनिल परियार भन्ने पात्र खडा गरियो ।
जसपाले आइतबार विज्ञप्ति नै निकालेर यसबारे खुलासा गरेको छ । परियार भन्ने पात्र जसपाको साधारण सदस्य पनि नरहेको र त्यहाँ पार्टी अध्यक्ष मोती रिजाल रहेको जसपाले स्पष्ट पारिसकेको छ । परियारले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा जेठ २८ गते पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै जसपा नेपालको नाममा पत्र बुझाइएको भन्दै जसपाले विज्ञप्ति निकालेर त्यसलाई जालसाजी र फर्जी कार्य भनिसकेको छ ।
‘हुँदै नभएको हैसियतमा फर्जी र नक्कली लेटरप्याड, स्ट्याम्प बनाई प्रयोग गरी दिग्भ्रमित गर्ने कार्य अनैतिक, जालसाजी र फर्जी कार्य हो,’ जसपाले भनेको छ । त्यस्तै गुरुङले जनमोर्चाबाट कारबाही भोगिरहेका कृष्ण थापाको हस्ताक्षर पनि बुझाएको खुलासा शनिबार नै भइसकेको छ ।
जताबाट प्रयास गर्दा पनि बहुमत नपुगेपछि प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले एउटा पक्षबाट मात्र दाबी गरेको मुख्यमन्त्री नियुक्ति पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । तर, आइतबार आफूले पनि हस्ताक्षर बुझाएको गुरुङले पत्रकार सम्मेलनमा भनिरहेका छन् । यसरी हेर्दा पृथ्वी सुब्बा गुरुङको निष्ठा र आदर्शको कुरा नेपाली लोककथामा खान नपाएपछि अंगुर अमिलो भन्ने स्यालको कथाजस्तै सुनिन्छ ।
सबै घटनाक्रम हेर्दा उनले बहुमत गुम्दा पनि राजीनामाको नाटक गरेर एक महिना मुख्यमन्त्री पद लम्ब्याएको कसैले भुलेको छैन । कसैको पनि दृष्टिबाट लुकेको तथ्य यो होइन ।
मुख्यमन्त्री पद जोगाउन उनले जनमोर्चाभित्र कुन हदसम्मको चलखेल गरे, ती दृश्यहरु पनि कसैले भुलेका छैनन् ।
दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनाउन उनले गरेको सम्झौता कुनै लोकतान्त्रिक निष्ठा र आदर्श जोगाउनका लागि थिएन भन्ने कुरा पनि दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
विश्वासको मत गुमाएपछि पनि अर्काको पार्टीभित्र चलखेल गरी अर्काे पार्टीको फर्जी पत्र बनाएर प्रदेश प्रमुखकोमा गई बहुमत दावी गरी जालझेल गर्ने प्रयास गरेकै हुन् । संसद विघटन गर्न खोजेको भन्दै आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले साथ नदिएको कुरा पनि उनीहरुले सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।
यी यावत हर्कतहरु ‘छेकेको छर्लङ्गै देखेको’ भनेजस्तो भइरहँदा पनि उनले ‘निष्ठा’ र ‘आदर्श’ लाई सस्तो गफको विषय बनाउन खोजे । तर, पृथ्वीहरुले बुझ्नुपर्ने हो कि नेपाली जनता यो हदसम्म मुर्ख छैनन् ।
चोर्ने असफल प्रयास गरेको मानिस चोर हुन्छ कि हुँदैन ? यसमा कानुनी तर्क एउटा होला, राजनीतिमा नैतिक प्रश्नको उत्तर पनि दिन सक्नुपर्छ । समयले यसको जवाफ खोज्नेछ ।